Indonesia in Focus: Imtixaan (bartaan) waxa loo abuuray inay Ilaah
Imtixaan (bartaan) waxa loo abuuray inay Ilaah
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (373)
(Qaybta saddex boqol iyo toddoba iyo saddex), Depok, West Java, Indonnesia, September 19, 2015, 2:19 pm).
Aayaddani waxay ugu horeysay shaaca ka qaaday (shaaca ka qaaday) Ilaah xagga Gabriel melaikat waa Iqro amarka (Akhri) si Nabi Muxammed. Waxaa loola jeedaa in in kasta oo Muhammad Nabiga ku jira xaalad ah qoris la'aanta weli Eebe ku amray Nabiga in ay bartaan, in uu korka ama xusuusan doontaa aqoonta Ilaah oo ah qaab Quraanka iyo Sunnaha (al-xigmad).
Ka kooban yahay Al-Quraanka Eebe gudahood sheegayaa in nin dhulka iyo caalamka oo dhan iyo waxa u dhexecya waxa sameeya Ilaah xitaa Ilaah ku talo jiro aayaha khalqiga oo dhan, iyo tan iyo caleemaha ka dhacay laamaha hore u qoran oo ah Ilaaha kitaabkii:
Ilaah ayaa sidoo kale dhigay ilaa iyo sii xiddiga, iyo waxa dunida, oo ha aadanuhu baaro labada cilmiyeysan iyo empriris wax kasta oo loo abuuray Ilaah, si ay dadku u sii kordheysa ogaan u dhac kebenaraan Ilaah, oo ninkaasuna wuxuu ahaa ku amray oo kaliya in aad Alle u caabuddo, ma in Eebe ka sokow ama mamnuucayo samayn shirk (-hawlgalayaasha wadaajiseen Eebe) oo mamnuuc ka hadhay oo jaahilka.
(BBC) - sawiro cusub ee pride ee New Horizons NASA qabsatay ceeryaanta low-been ku dhagno dusha sare ee Pluto.
Muuqaal buurta Patriots Pluto caalamka iyo bannaankii xaadha ayaa sidoo kale laga arki sawirada.
Prof Alan darantahay, oo madax ka ah cilmiga madax howlgalka, ayaa sheegay, "Sawirkan waxa runtii aad aad dareento in ay jiraan, ee Pluto, sahan xaalad ka mid ah isaga u gaar ah."
"Laakiin sawirka sidoo kale waa daahfurka cusub ee sayniska, daaha si faahfaahsan jawiga ee Pluto, buuraha, glaciers iyo bannaanka," ayuu hadalkiisa raaciyay.
Horizons New helay badan oo dareenka ka dib, waxa uu Pluto on July 14, fogaan ah 12,500km.
Dhiismeedka NASA isugu dheeraad ah oo si weyn loo yaqaan tan iyo Horizons New
Culumada saynisku waxay dhihi, ayada oo ay keento caddaymo dheeraad ah oo ay goobjoog ka ahaayeen biyaha ee Pluto iyo sidoo kale on Earth, laakiin ku lug noocyada kala duwan ee barafka.
Pride NASA bilaabi xog ururinta ee sannadka soo horaantii bishaan, jidaynayey saynisyahano in ay sii wadaan Analisia muuqaalka guud ee dhulka ay.
Hortooda A cusub ee Bisha Cas ee Pluto loo diray dhulka on Sept. 13.
Light riwaayado ka qorraxda waxay ka caawisaa muujiyo caalamka ugu da'ada ah dhul kala duwan iyo in ka badan darsin ah lakabyo ciiro in jawiga.
ARTI tusaale Quraanka
Qur'anul al-karim sida buugga Hanuuniye ku jira doodo badan oo waxtar leh ayaa loo baahan yahay in ay aadanuhu xaaladaha oo dhan. Tusaale ahaan, in barayay hababka iyo sida loo Cudarada qiimaha qalbiga ka mid ah ayaa. Habka loo isticmaalo waa hab ah in uu yahay mid fudud oo ugu cad. Waxaa ka mid ah habka uu yahay in masaalladii ka sameeyaan. Habkaan waxaa loo isticmaalaa si uu u gudbiyo dhibaatooyinka waa mid deg deg ah oo muhiim ah, sida dhibaatada tawxiid iyo xaalad ka mid ah kuwa mentauhidkan Alle, shirk dhibaatooyinka iyo xaaladaha Mushrikiinta, iyo noocyo kala duwan oo camal kale oo waa weyn. Ujeeddadu waa dabcan si ay u fahmaan iyo inculcate qiimaha sharaf in aan la taaban karin hab ku tilmaamay wax la taaban karo si aan la arki karin, haddii isha. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan waayo, anigoo addoonkaaga ah in fiiro gaar oo isku day inaad fahanto ujeedada masaalladii in.
MUUJIN iyo sayniska eg biyo roob
Ilaahay ayaa loo ekaysiiyaa nin ka soo dajinta iyo aqoon in Alle soo dejiyey rasuulladii la roobka uu, halka wadnaha ee waxaa loo ekaysiiyaa inay dhulka iyo dooxada. Saamaynta ay ku sayniska iyo muujinta wadnaha ee loo ekaysiiyaa saamaynta roobka ee ciidda ee dhulka. Waxaa ka mid ah dalka ka jira layaal in uu u nuugo karaa biyo iyo koraan cawska, sidii qalbigii fahmi karaan dajinta Eebe Ilaaha Qaadirka ah oo aad u dhici nolosha.
Waxaa ka mid ah dalka ayaa sidoo kale wuxuu ahaa dhul ah in biyo celin karin laakiin dhirta ma tumbuhdi karo. Dadka isticmaali kartaa biyaha ku hara si ay u daboolaan baahidooda, sida la cabbo, qubayska, cunidda, oo sidaas. Tani waa permisalan u Quluubta dadka korka laga yaabaa inuu soo Dejiyey iyo waxa uu sidoo kale menyampaikanya in qof kale, uu kaliya ma u fahmi karaan si qoto dheer. Dadka sidan oo kale weli waa wanaagsan yihiin, laakiin heerka hoos degree dadka maskax ee kooxda koowaad.
Markaas waxaa sidoo kale waa dal aan biyo celin karin iyo doog aan korin karo. Waa masaal, wadnaha oo aan ka faa'iidaysan karto oo dhan ka soo dajinta, labada saynis, xafididda ama dhaqanka.
Side ee isla'egta u dhexeeya beerka iyo dhulka ama dhulka masaal ku xusan u muuqataa mid cad, sidaa darteed waa iskaga mid u dhexeeya roob iyo dajinta. Roobku waa isha nolosha jirka aadanaha iyo il Risqiga, dajinta iyo sayniska sida il nolosha ruuxiga ah ama waxyaalaha qalbiga ku jira aadanaha.
Jumlad TAUHID loo ekaysiiyaa geedka wanaajiya
Ilaahay ayaa sidoo kale Jese weedha ah midowga geed wanaagsan oo had iyo barwaaqo ah mar kasta.
Miyaydaan arkaynin sida Eebe u ah ayaa sii watay xukun wanaagsan sida geed wanaagsan, xididdadiisuna waa kuwo adag oo laamaheeda (adag) oo korkiina samada, geedka midhihiisa xilli kasta siinayaa idanka Eebahood. Ilaah masaallo ayaa waxa ay ka dhigi aadanaha si ay mar walba xusuusan. [Ibrahim / 14: 24-25]
Sidoo kale geed ka ifayo beeray qalbi keliya ee. Waxa uu sidoo kale sii wadi doontaa inay midho ama faa'iido. Waxaa ka mid ah midhaha ka ifayo sida niyad wanaag, sharaf leh anshaxa iyo camal wanaagsan. Gargaarkan waxaa aan dareemay oo kaliya kuwa tauhid, laakiin sidoo kale wuxuu ogaaday dadka kale.
Gaalada ah u dhigantaa la Spider
Alle Jese u yeedh oo Gaalada ah oo magan in aan ka ahayn Ilaahay sidii buul caaro tolida. Sababtoo ah cobwebs waa buulkeedii liita , sidaa darteed in ficiladiisu buulkooda ka dhigi doonaa taagta daran oo keliya.
Masaalka kuwa Eebe ka sokow awliyo waa sida xuubcaaro oo ka dhigaysa guriga. Dhab ahaan guriga ugu liita 'Guri Caaro hadday wax ogyihiin ee. [Al-Ankabut / 29: 41]
Sidoo kale la cimrisiiyo Yeeshay sokeeye oo Eebe ka soo Ilaaha Qaadirka ah. Waxay isu wiiqi doonto oo kaliya, maxaa yeelay, qalbigiisa ayaa jabiyay xiriir la leh Ilaahay. Heart sidan oo kale u noqon lahayd mid aad u nugul oo dhan dhinac, oo ay weheliso ku tiirsanaanta oo ku saabsan uun, markaas isagu wuxuu ahaan doonaa ka jilicsan. Waxa uu u maleeyay ummadda ka faa'iidaysan karto oo isaga ka khatar badbaadiyo, laakiin ma ay yeelin.
Xaaladaha iska cad aad u kala duwan oo leh xaalad wadnaha ah Muslimiinta oo ku tiirsan oo keliya Eebe Ilaaha Qaadirka ah. Qalbigiisu wuxuu u xoog badan yahay sida u yahay xoogga iimaanka, tauhidi iyo ku tiirsanaanta Alle oo diyaarin wax walba. Kuwaas oo ay ka go'an oo kor ku xusan xeerarka diintiisa Sida maskax Muslimiinta. Hadalladiisa iyo falimihiisana weli wanaagsan, oo lacag la'aan ah ka uxuu addoonsiga, ma iyaga ugu tiirsan gabi ahaanba.
Tani waxay kasoo horjeedaa Mushrikiinta loo ekaysiiyaa carrab kuwii dhegahala'aana mar kale, taas oo kaliya culays. Oo markuu wax wanaagsan ma dhali karo, inkastoo siiyey dardaaranka kala duwan. Qalbigiisu wuxuu had iyo jeer ahaa ku tiirsan tahay doonista badan khalqiga, sidaas si dadban la addoonsado oo ayan haysan xoriyad. Sidoo kale diperumpamakan Eebe Ilaaha Qaadirka ah si ay dadka u dhacay ka dheereeyey, oo lagu dhuftay shimbiraha iyo selanjut jeex kaasi oo ka soo saaray qaab.
Iyada oo u kali yeela Eebe, ma Mushrikiin ahayn,. Qof kasta oo u Yeeleen wax Ilaah, ka dibna waxay la mid tahay ka mid ah Samada oo wuxuu ku dhuftay by shimbir, ama dabaysha si ay meelo fog. [Al-Hajj / 22: 31]
Haddii dhan waxay ka fiirsan Ilaah waa ururay inay ugu badan khalqiga yar duusha oo iyagu ma ay awood u yeelan doonaan in ay sameeyaan. Sidaas waxa ay keliya haddii? Halkii la abuuro duqsiyo badan, soo celinta iyo dib u hanato cunto qaaday xitaa ma ay duuli karaan. Ma jiraan cillado wax ka sii badan taas? Ma jiraa Jaahil ah waxaa ka xun yahay Jaahil ah oo Mushrikiinta? Xaaladdan cudur waxaa loo sii dartay ilaahyo badan waxay caabudi in iyaga oo aan suurto gal guuleysan ahaanshaha waxaa dhammaan. Dadka sidan oo kale waxaa mar kasta ku warameen dad caloolxumo iyo in dhibaatadu jeer ku dhuftay.
Haddaan gaaladana ay ogaadaan inta badan masiibadanu, uu isku dayi lahaa in uu naftiisa ka badbaadiyo xumaantay kala duwan. Waxa kale oo uu noqon doonaa inay ogaadaan in inta lagu jiro waqtigan uu khasaarinayay oyna ka dib aan loo eegayn diintooda. Tani waa mid lid ku ah Muslimiinta oo kaliya Koox kastaha qaar in Alle. Qalbiga ka dagan u yihiin diin xaq ah. Waxay sidoo kale ay ogaadaan in midhaha laga helay wax badan ka fiican in farxad weligeed ah ee nolosha ayaa sidoo kale weligeed.
Amal addoon tahay sida beer
In Masaal kale, Alle Jese camal sida beerta.
Oo waxay u eg kuwa ku bixiya Xoolahooda doonidda raali ahaanshaha Eebe iyo adkaanta Naftiisa, sida beer aan waxa uu ku yaalaa on taagga ah oo waa la waraabin Roob, ka dibna waxa uu ku keenaa laba kol in ay miro. Haddii roob culus aan u waraabiyo, markaas roob khafiif ah (ku filnayd). Eebana waa arkaa waxaad camal falaysaan. [Al-Baqarah / 2: 265]
Alle sheegaye camal falay daacadda, saafiga ah oo dhan in burburisay karaa beer ku yaal sida meesha ugu fiican, kaliya dabaysha iyo qorraxda, iyo ma gaaban on biyaha. Dhulka noocan oo kale ah inkasta oo aan la saameeyeen roobab xoogan, tusaale ahaan, kaliya meelsare ah ka dibna waa ku filan tahay in ay saxaafadda oo sii kordhaysa rays sameeyo. Hadii shaqsiyaadka kuwan waxaa la kulmay, ka dibna dabcan midhaha keentay noqon doonaa mid aad qanci karo, caleemaha yihiin hawada oo cufan oo har iyo qabow. Qofka iska leh mar walba goosan doono natiijada aan ka werwerayn.
Laakiin haddii ay abaaraha ku dhuftay ama masiibo ku dhuftay iyo gubay.
Ma jiraan cid idinka mid ah oo aad jeclaan lahayd inay u ahaato Beer ee taariikhaha iyo canab in biyaa ay dureeri Dhexdeeda Wabiyaal iyagoo ku dhex jira, waxayna lahayd ee beerta oo dhan cayn kasta oo midho ah, markaas u yimid da'da jir ah ninka uu ahaa in ay leeyihiin carruurta oo aan weli la yar. Markaas dabaysha cod dheer oo ay ku jiraan dab, oo la gubaa. Saasuuna Eebe sharxayaa aayaadkiisa si aad u waaba intaasoo aad u malaynaysid inay ku saabsan. [Al-Baqarah / 2: 266]
Markaas waa masaal, dadka samayn dhaqanka ah, ka dibna wuxuu sameeyey wax magdhow Halaagtay, waxa uu sameeyey, sida shirk, nifaq ama kale falal akhlaaqda in tirtiri karin Abaalka. Sida loo badiyo!
Laga soo bilaabo masaalkan, waxaannu ku tirinnaa karaa in dadka kuwaas oo aan rumaysad iyo dadka oo dhan sida aan lahayn beer oo dhan.
Side ee isla'egta u dhexeeya hay'ad samafal oo beerta waa tayada goob si weyn u saameeyeen filaanshaha oo biyo ah, bacriminta ciidda iyo meel naxariis. Sidaas oo kalena la camal. Kasbadeen, ayaa si xoogan u saameeyay dajinta sida beerka nafaqada. Markaas ayaa sidoo kale gaystay ayaa dhameystirtay oo dhan looga baahan yahay la helo hay'ad samafal oo natiijo lagu qanci karo.
Oo haddana wax badan oo perumpaman marti Alle Quraanka. Markaasuu masaal kula kala duwan la fahmi kara kaliya dadka aan wax kasayn. Marka masaalladan lagu dabaqo diperumpamakan ah, markaas wax walba oo ka soo muuqan doona cad.
(Xigtay kitaabka hisan Al-Qawâidul, Sheekh Cabdiraxmaan bin Nasir as-Sa`di, Rule 22)
[Guuriyeen ka edition magazine ee As-Sunnah 01 / Year XV / 1432H / 2011. Published Lajnah Foundation Istiqomah Surakarta, JL. Solo - Solo Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo 57 183 Tel. 0271-858197 Fax 0271-858196]